रसुवा प्रलेस र स्मृतिका केही गोरेटाहरू — OnlineDabali
Posted on February 1, 2019 by अनलाइन डबली
मसँगै बसेका ती नुवाकोटे साथी देवीघाटमा झरे । ती साथी झरेपछि मन केही शान्त भयो । केको मन शान्त हुनु, फेरि अर्को आपत् आइलाग्यो । मसँगै रहेको जब सिट खाली भयो, पछाडि बसिरहनुभएकी एकजना मोटी दिदी त्यही सिटमा आएर बस्नुभयो । ती दिदीको शरीर मात्र त्यस्तो रहनेछ, स्वभाव पनि उस्तै रहेछ । बसबाट देखिएको अलि परको गाउँको बारेमा यसो सोध्न खोजेको त उहाँले बोल्न पनि पैसा पर्ला जस्तो गर्नुभयो । आखिर नुवाकोट न प¥यो, कतिखेर ओर्लूँ र लामो सास फेरूँ जस्तो भइरह्यो । तथापि निर्माणधीन बाटो भएर पनि चालकले राम्ररी नै नुवाकोटको त्रिशुलीबजार करिब ४ बजेतिर पुर्‍याए ।
बस त्रिशुलीबजारबाट माथितर्फ लाग्यो । अझै सानो बाटो रहेछ । बेला–बेलामा जाम परिराख्ने । तैपनि बस आफ्नै रफ्तारमा अघि बढिरह्यो । बस वेत्रावती पुग्यो । त्यहाँ स–सानो लफडा परेको रहेछ । एउटा ट्र्कले घर भत्काएर त्यहाँ आएको रहेछ । त्यहाँ प्रहरीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यहाँबाट बस जति–जति उकालो लाग्दै थियो, उति–उति मन रमाउँदै थियो । पर–परका डाँडाहरू पनि देखिन थाले । कतिपय डाँडा हिउँले सेताम्मै थिए । बस जति माथि–माथि जाँदै थियो, उति–उति परपर डाँडामाथि रहेको घाम पनि बास बस्न ताउर–माउर गर्दै गरेको अनुभूति हुन्थ्यो । अलि माथि गएपछि बाटोमा केहीबेर रोकिनुपर्यो जामका कारण । त्यहाँ एक बालक भेटिए । ती बालकको दुवै गाला स्याउका दानाजस्तै थिए, सा¥है लोभलाग्दा । जिन्दगीमा त्यति हृष्टपुष्ट र सुन्दर बालक कमै देख्न पाइन्छ । त्यसपछि बस कालिका गाउँपालिका प्रवेश ग¥यो । मलाई तोकिएको ठाउँ मुख्य बजार भन्ने थियो, मैले त्यसैअनुसार सहचालक भाइलाई भनेको पनि थिएँ तर ती भाइले निकै माथि घुम्तीनेर पुगेपछि पो “तपार्ईं झर्ने यही हो सर” भने ।
पहिलोपटक रसुवाको माटोमा पाइला राखियो । घुम्तीमा झरेपछि उद्धव सरलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँले “ओहो ! तपाईं त निकै माथि पुग्नुभएछ, तल पेट्रोलपम्प भएको ठाउँमा आउनुहोला” भन्नुभयो । म त्यहाँबाट फकेँ । चौकीको नजिकैबाट एकजना भाइले बाइकबाट रिसिभ गर्नुभयो । यसरी कपिल होटलमा उद्धवजीसत भेट भयो । उद्धजीसित अन्य साथीहरू पनि हुनुहँुदो रहेछ । परिचय भयो । कोही पुराना, कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । निकैबरको कुराकानीपछि त्यही पकाइएको स्वादिलो खाना त्यही खाएर अलि तल रहेको कपिल होटेलमा रात बिताइयो । होटेल सञ्चालक आचार्यजी र भाउजुको आतिथ्यता नेपाली ग्रामीण जीवनको जिवन्त उदाहरण थिए, जुन कुरा क्रमशः दुर्लभ बन्दैछ ।
ठीकै समयमा सम्मेलन सुरु भयो । प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नं. ३ का इन्चार्जको हैसियतबाट सम्मेलनको प्रमुख आतिथ्यताको जिम्मा मेरै थियो । सम्मेलनको अध्यक्षता प्रलेस अध्यक्ष उद्धव रिजालले गर्नुभएको थियो । सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रलेस सचिव हेमनाथ खतिवडाले लिनुभएको थियो भने स्वागत प्रलेस उपाध्यक्ष राजेन्द्रले पौडेलको गर्नुभएको थियो । प्रमुख अतिथिको हैसियतबाट ब्यानर पढेर प्रगतिशील लेखक सङ्घ, रसुवाको तेस्रो जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गरियो । प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै प्रगतिशील विचारलाई भुइँतहसम्म पुर्याउन प्रलेसको आवश्यकता रहेको कुरामा बढी जोड दिएँ । प्रलेस सत्ताको तावेदारी होइन, खबरदारी गर्ने प्रतिरोधी साहित्यिक संस्था हो । यसको प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक रूपमा हामीबीच ठूलठूला समस्या भए पनि साहित्यिक–सांस्कृतिक मुद्दाका न्यूनतम आधारमा हामी एकैसाथ उभिएका छौँ । मेरो थप भनाइ थियो— प्रगतिशील लेखक सङ्घ सबै वामपन्थी तथा प्रगतिशील लेखक तथा साहित्यकारहरूको साझा मोर्चा भएकाले यसलाई साझा थलोकै रूपमा विकास र संरक्षण गर्दै लैजानुपर्ने कुरमा मेरो जोड रह्यो । लेख्ने कलाको विकास गर्न, आफ्नो विचारहरूलाई तल्ला तहसम्म पु¥याउन र वामपन्थी तथा प्रगतिशील विचारलाई भुइँतहसम्म पु¥याउनको लागि यो प्रगतिशील लेखक सङ्घले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यो प्रक्रियालाई अझ निरन्तरता र तीव्रता दिन आवश्यक छ ।
सम्मेलनमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा बोल्नुहुँदै माधव लामिछाने ‘समिर’ ले साहित्यिक–सांस्कृतिक आन्दोलनको विषयमा निकै महत्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो । समिरले रसुवा जिल्लामा विचार, सूचना आदान–प्रदानका लागि सञ्चार–माध्यमको अभाव खट्किएको कुरा पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न समयमा प्रकाशनमा आएका साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक पत्रिकाहरू पनि आर्थिक अभावको कारण नियमित हुन सकेनन् । यसले गर्दा जिल्लाका जनता सूचना पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुन पुगेका छन् ।”
लामिछानेको थप भनाइ थियो, “जिल्लाका नेतृत्वले पनि प्रगतिशील लेखक सङ्घलाई क्रियाशील गर्ने र राजनीतिक विचार जनतासामु पु¥याउनका लागि विभिन्न प्रकाशनका लागि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।” उक्त सम्मेलनमा प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नुवाकोटका अध्यक्ष नवदीप अजनवी, साहित्यकार धर्तिचन्द्र यात्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला समिति सदस्य रामकुमार न्यौपाने, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष अर्जुन पौडेललगायत अतिथिहरूले पनि शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । सम्मेलनले अध्यक्ष उद्धव रिजालले प्रस्तुत गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन गडगडाहट तालीका साथ पारित गरेको थियो ।
प्रमुख अतिथि एवम् प्रदेश इन्चार्जको हिसाबले प्यानल प्रस्तुत गर्ने जिम्मा पनि मेरै थियो । मैले नयाँ कार्यसमिति, सल्लाहकार समिति र राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधिको नामावली प्रस्तुत गरेँ । त्यसलाई हलले एक मतका साथ ताली पिटेर पास गरेको थियो । सम्मेलनले उद्धव रिजालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय प्रगतिशील लेखक सङ्घ, रसुवा जिल्ला समिति चयन गर्यो । अन्य पदाधिकारीहरूमा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल, सचिव विश्वास नेपाली र कोषाध्यक्ष शुष्मा न्यौपाने रहनुभयो ।
सम्मेलनद्वारा निर्वाचित अन्य सदस्यहरूमा हेमनाथ खतिवडा, शिशिरकुमार न्यौपाने, नारायणप्रसाद देवकोटा, तारानाथ न्यौपाने, कविता स्याङ्वा, जयराम आचार्य र एक सदस्य पछि थप्ने गरी रहनुभएको छ । उक्त सम्मेलनले माधव अर्याल, इन्द्र गौतम, माधव लामिछाने, चेरुङ र धर्तिचन्द्र यात्री रहनुभएको सल्लाहकार समिति पनि निर्माण ग¥यो । सम्मेलनले ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि नारायणप्रसाद देवकोटा, भगवती न्यौपाने, हेमनाथ खतिवडा, विश्वास नेपाली, जयराम आचार्य, शिशिर न्यौपाने, राजेन्द्र पौडेल र शुष्मा न्यौपाने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रतिनिधिको छनौट पनि गर्यो । सो सम्मेलनमा प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नुवाकोटका अध्यक्ष नवदीप अजनवी, सचिव रामहरि गजुरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला समिति सदस्य एवम् नौकुण्ड गाउँपालिका सचिव रामकुमार न्यौपाने, कालिका गाउँपालिका इन्जार्च अर्जुन देवकोटालगायत सहभागी थिए । सम्मेलन सम्पन्न भएपछि केही तस्बिरहरू लिइयो । केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने अवधारणासहित र पुनः भेटिरहने अपेक्षासहित काठमाडौं प्रस्थान गरियो । जब यात्रा काठमाडौंतिर मोडियो, तब मनमा रसुवाका विविध विषय उर्लन थाले ।
रसुवा नेपालको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंबाट नजिकै भएर पनि विभिन्न समस्याहरूसित जुधिरहेको देखिन्छ । यो ६० प्रतिशतभन्दा बढी तामाङ जातिको बसोबास रहेको हिमाली जिल्ला हो । तिब्बत–चीनसँग नेपाल र भारतको प्राचीन प्रमुख व्यापारमार्ग र मुख्य घाँटी रसुवागढी यसको मुख्य आकर्षण हो । रसुवागढीको नामबाट यो जिल्लाको नाम रसुवा रहेको मानिंदो रहेछ । तामाङ भाषामा ‘र’÷‘रा’ को अर्थ बाख्रा तथा भेडा, च्याङ्ग्रा र सेवाको अर्थ पालन भन्ने हुँदो रहेछ । त्यसैले ‘रासेवा’ को अर्थ बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेडा पाल्ने खर्क भन्ने हुँदो रहेछ । त्यही ‘रासेवा’ शब्दबाट रसुवा भएको बताइन्छ ।
यहाँका जनताले बेला–बेलामा ठूल–ठूला विद्रोह गरेको इतिहासमा पनि पढ्न पाइन्छ । १५१२ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको र ६१४ देखि ७१३४ मिटरको उचाइमा रहेको यो जिल्ला सामरिक तथा रणनीतिक हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण रहेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । विविध विशेषतायुक्त यो जिल्ला २०७२ सालमा आएको विनासकारी भूकम्पद्वारा क्षतविक्षतको अवस्थाबाट अझै पनि तङ्ग्रिसकेको देखिँदैन । यो जिल्ला यतिखेर तमाम समस्याका बीचमा अनेकौँ सम्भावना बोकेर पर्खिरहेको छ । यहाँ प्रगतिशील लेखक–साहित्यकारहरूका बीचमा उचित र उयिुक्त हार्दिक ऐक्यबद्धताको विकास गर्दै यो क्षेत्रमा रहेका सबै प्रगतिशील लेखक–साहित्यकारलाई समेटेर सिर्जनात्मक तथा विचारधारात्मक कार्यलाई तीव्रता र निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको पनि महसुस भयो । यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक उन्नयन अब नयाँ ढङ्गबाट गर्नुपर्दछ ।
जापान उडानको लागि निगमले अनुमति पायो
वनमा शिकार गर्न जाने ३ जना भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ
Posted in डवली विशेष, मुख्य खबर, साहित्य | Leaveareply